Diirada Galmada & Barta Kacsigu Ka Soo - iftineducation.com
Diirada Galmada & Barta Kacsigu Ka Soo
1- In Aad Furayaasha Siiso : inta badan haweenka gariirka macaanka kuma garaan galmada tooska ah ,haweeneydu waxa ay u baahan tahay in si wacan looga soo dareen kiciyo kintirka si toos ah , sidaa oo ay tahay waxaa jira haween aamisan in macaanka kaliya lagu gaaro galmada tooska ah , ogoow ninka galmo iyo baashaalin macaan ayuu sameynayaa marka uu ogsoon yahay goobaha lamaantiisa raaxada ka qaadato ee gabaryaheey u sheeg goobaha aad raaxada ka hesho si hawada sare uu ku giliyo.
2-Kala Fogaansho : farqi weyn ayaa u dhaxeeya qaabka macaanka ay ku helaan ragga iyo haweenka , ninka waxa uu macaanka dhan ku gaaraa afar daqiiqo kaliya in biyaha uu soo tuuro ayay ku xeran tahay halka haweenyda ay u baahan tahay 10 daqiiqo oo baashaalin meel waliba ah markaas ka dib loo qaado heesaha qaraamiga , marka gabaryaheey u sheeg in aad u baahan tahay baashalain kulanka ka hor iyo ka dib.
3- Iska Yeel Yeelid : inta badan haweenka waxa ay iska yeelaan in ay gaaraan macaanka galmada iyaga oo aan gaarin , waxa ayna tani u laabaneysaa dhowr arin oo ay ugu horeeyso dhanka dareemahooda oo ay diidayaan in banaanka soo dhigaan , balse xasuusnoow gabaryaheey in iska yeelidda in aad macaanka gaartay in aysan sara u qaadeyeen shaqada ninkaada balse waxa uu u qaadanayaa in uu ku qanciyay sidaas ayuuna ku sii soconayaa marka runta u sheeg adiga oo maacan helin ha jilin.
4- Kala Hadal Mowduuca: waxaa labada lamaane muhiim u ah in ay ka wada hadlaan arimaha sariirta iyo baahidiina ku aadan ,ha ahaado ka hadal mid saraaxo ah oo is weydiiya in midkiina midka kale uu qanciyay wacdaraha.ciom waxa ay ku leedahay balse xiliga aad ka wada hadleysaan yeesan noqon marka sariirta la joogo , hadii ay jirto in hab raaxadiisa ay qasab tahay in uu wax ka badalo u sheeg .
5- Talooyin Afka Ah Iyo Kuwo Aan Afka Aheyn : Xiliga sariirta sii talooyinka afka sida qaali gacantaada xagga ku salaax , inta ,hoos, is daji , fadlan meeshaas sidaas ka yeel , ama talooyin aan toos ah aheyn oo adiga gacantiisa qabo oo meesha aad rabto tus .
6- Tilmaamo Wax Ku Ool Ah : Hadii sida aad rabtay uu meel u gaaracay u muuji adiga oo qaab neefsasho ama hadal ku fahan sinaya tusaale , haa meeshaas aad baan u dareemayaa , ogoow cododka dhabta ah dareen ayuu ka sii qaadayaa .